Indlela aphathe induna phezu ingono
Kusukela namuhla, abantu abaningi bakhathazeka ngenkinga kakhulu elisemandleni yokuthi ngezikhathi ezithile kukhona ukuqubuka kwesikhumba phezu kwesifuba ngesimo induna. isici Onjalo, njengoba nezinduna ingono, inikeza eziningi kabi iziyaluyalu ntu. Futhi njalo isikhalazo livela yobudala eyevile eshumini nambili.
Vela ku izinkinga ingono induna ngenxa yobudala ngengqondo, kodwa hhayi kuphela. Kuyaphawuleka ukuthi ukuphazamiseka kwama-hormone ohlelweni womuntu awuyona imbangela evame kakhulu ukuze ivele ingono induna. Nokho, ukuze sithole beqiniso imbangela induna e ingono endaweni kungenziwa kuphela kuboniswane nge onguchwepheshe.
Induna ku ingono endaweni lihlotshaniswa hhayi kuphela usakhula, ngokuvamile, lesi sifo kwenzeka uma umuntu esefinyelele umuntu omdala. Ngemva kwenkathi emphilweni abasha ngokusebenzisa amangqamuzana esikhumba somuntu afa ngokushesha ngokwengeziwe, kangangokuthi abanye abantu babhekana odla we ikhule ezimbotsheni nokuvuvukala olwengeziwe. Kulokhu, kufanele sinake yokuthi lesi sifo yangaphakathi, okwenzeka ubuthakathaka ngokuqonda yezimonyo ingabagulisa kumiswa induna e ingono ndawo.
Uma izingono induna, kanye ikukhathaza, kubalulekile kakhulu ukuba kubonakale kuya wesikhumba, futhi ukuvakashelwa akufanele imisiwe kuye. Uma ufuna ukuchitha ukwelashwa lenkhulu ingono endaweni, kufanele kuqala ibhekane Ukuhlolwa ebanzi: ukuxilongwa wenziwa izifo kunokwenzeka, kuyakuba ukuhlolwa kwezokwelashwa, kodokotela.
Ukwelashwa induna phezu ingono
Okokuqala, kufanele kuphawulwe ukuthi, ukunakekelwa self-ekukhuthazeni izimonyo ebusweni - lezi zinto ngeke kukusize. Uma unesifiso balahle induna ngempela, kudingeka silungiselele ushintsho olukhulu indlela yakho yokuphila. Okungukuthi, kungase kudingeke ukuba ngokuqinile ukulandela ukudla, wake extricate uqobo kusukela amnandi, okubabayo, okugazingiwe usawoti.
Afune ngayo isiqondiso wesikhumba njalo ukulalela futhi ukuthi zonke izimfuneko Uchwepheshe ezidlulayo yonke inkambo yokuhle ukwelashwa - konke lokhu kuzokusiza uthole umphumela omuhle. It is ibuye Kunconywa ukusebenzisa umoya zokugeza ngenxa nezindlala mammary.
ekuhambisaneni elula imithetho yokuhlanzeka kuqinisa inqubo yokuvuselela isikhumba ingono ndawo. Ngokuphumelelayo kusiza itiyela insipho uma ukugeza izingono kanye sebele. Tar insipho ahlanze isikhumba futhi ephumelelayo kokuqhuba zokuvimbela kokushelela.
Ukuze isikhumba endaweni esifubeni kuzodinga ezihlukahlukene buso ngesisekelo izinto zemvelo. Buso angase uzilungiselele ekhaya ngezinto zemvelo eluhlaza. Akubalulekile ukulahla ukusetshenziswa izingxenye ezifana Aloe juice noma isanqante juice.
Uma uzithola phezu ingono induna kufanele sigweme izingubo zokwenziwa Friend, okuyinto igudla kakhulu emzimbeni. Kumele kuthathwe ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi ukukhethwa awe kuphela izinto zenziwa kusukela ukotini zemvelo noma yelineni. Ngokuvamile, dermatologists ukweluleka iziguli zabo ukugqoka kuphela okuxekethile kufaneleka kangakanani, njengoba le nto kusekelwe ngezinto zemvelo engahluziwe akusho ukulimaza isikhumba
Lalela iseluleko sabantu asebethole babhekana nenkinga induna e ingono endaweni, vakashela njalo uchwepheshe abanolwazi. Kulesi simo, uyoba balahle induna in the izingono kanye uzokwazi ukugqoka oyintandokazi ingubo decollete yakho, a non-yemvelo izinto zokusetshenziswa izingubo.
Njengoba kuvela ingono, nezinduna zizama izindlela ezahlukene ukuze ufihle noma esingalindelekile. Ukuze waphinda hhayi ukuphoqelela isifo, kungcono ukuqala ukwelashwa ngokushesha kwesikhumba.
Dermatitis Bullous: izimbangela, izimpawu, ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Iqhubezela izinyawo zabo kanjani ukwelapha futhi kuvimbele
Congestive optic disc: izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa
Listeriosis - kuyini? Listeriosis - Izimpawu, Ukwelashwa, Prevention
Ukuntuleka kwe-calcium emzimbeni: izimpawu. Indlela yokwenza i-ukuntuleka calcium
Isitayela zaseScandinavia elingaphakathi - ukunakwa imininingwane
Hawthorn: zokutshala kanye nokugcinwa, incazelo, ukukhiqizwa kabusha. engadini Hawthorn: zokutshala nokunakekela
Indlela ukuhlela engadini engadini futhi?
Meringue iresiphi. izindlela ezintathu ezahlukene
Kanjani ukugubha ingane lokuzalwa - iminyaka engu-3? Indlela ukuhlela lokuzalwa kwengane eminyakeni 3?
Neva: ziyamaniswa nokungangeni. nemingenela Major iNeva
Indlela ukubheka zonke 100 futhi ukubamba nhla ekuthandeni.
Fila Brasileiro noma Brazilian incazelo Mastiff zohlobo, uhlamvu, ukubuyekezwa
Fine Iphunga Armani - Classic kwabesilisa nabesifazane